Home Wararka XOG:Dowlada Suudaan Oo ka Carootay hadalkii MW Farmaajo&Maxaase ka jira in Farmaajo...
XOG:Dowlada Suudaan Oo ka Carootay hadalkii MW Farmaajo&Maxaase ka jira in Farmaajo Oo safar ku tagayo Suudaan?
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa maanta lagu wadaaa inuu u ambabaxo isaga iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo dalka suudaan halkaasi oo kulamo uu kula yeelan doono dhigiisa dalka suudaan.
Safarka Madaxwynaha uu ku aadi doono dalka suudaan ayaa yimid Xilli Xaalada Siyaasadeed ee Gobolka Geeska Afrika ay weji kale yeelatey.
Madaxweynaha dalka Sudan Jeneraal Cumar Xasan Al-bashir iyo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa yeelan doona kulan gaar ah oo looga hadli doono arrinta Eritrea, Somalia iyo Jabuuti.
Dowladda Jabuuti ayaa walaac xooggan ka muujisay in Dowladda Soomaaliya ay hor-boodo Ololaha lagu doonayo in cunaqabateynta looga qaado Eritrea.
Arinta Ereteria Iyo Soomaaliya ayaa siyaabo badan loo arkay kadib markii la sheegay in xiriirka Labada Dowaladood ay Saameeyn taban ku leedahay dalka Jabuuti.
Previous articleWaare Oo jawaab kulul siiyay Farmaajo”Jabuuti illaa aduunyada laga duubo wallaalo ayaan ahaan doonaa’
Next articleDEG DEG:Afgambi qorsheysan Oo Lagu riday Madaxweyne Cabdi iley
Al-shabaab oo la wareegay Xawaadleey ka dib markii ay kasoo Baxeen...
Waxaa Bilowday is Casilaado Dawladda ah oo aan la Ogeyn Halka...